I-Chromebook: Guqula ukujonga kuGoogle amaXwebhu
Ngaphambi kokuba uqale ukuthayipha uxwebhu kwiChannelbook yakho, unokukufumanisa kuluncedo ukutshintsha umbono wakho kuGoogle Amaxwebhu. Enye indlela onokutshintsha ngayo umbono wakho kukufihla imenyu yeZicelo.
Cofa nje Jonga kwimenyu yeZicelo, nakwimenyu yokujonga ebonakalayo, khetha uLawulo lweCompact. Xa usenza oku, iiMenyu zeZicelo ziya kunyamalala emehlweni, njengoko kubonisiwe apha.
Ukubuyisela imenyu yeZicelo, cofa i icon ekhangeleka ngathi iintolo ezimbini ezibonisa ezantsi kwicala lasekunene lesixhobo soHlela.
Ungayifihla imenyu yezicelo ngokucinezela i-icon ekunene kwe-Hlela isixhobo esibonakala ngathi ziintolo ezimbini ezijongise phezulu, okanye ngokusebenzisa indlela emfutshane yebhodi yezitshixo Shift + Ctrl + F ukufihla nokutyhila imenyu yeZicelo.
Ukuba uluhlobo lomntu othanda ukususa i-clutter emehlweni ngaphambi kokuba uqale ukusebenza, unokukufumanisa kuluncedo ukufihla irula, ubeke amaXwebhu kwimowudi yeScreen esigcweleyo. Imowudi yeScreen esigcweleyo ifihla yonke into ngaphandle kweyona ndawo iphambili yoxwebhu. Ungajika imowudi yeScreen esigcweleyo ngokulandela la manyathelo:
Cofa Jonga kwimenyu yezicelo.
Uluhlu lokutya olunokuprinta
Kwimenyu yokujonga ebonakalayo, khetha Bonisa uMlawuli.
Uphawu lokutshekisha ecaleni koMbonisi woMlawuli luyanyamalala, kwaye iMenyu yokujonga iyavala.
Kwakhona, cofa Jonga ukuvula imenyu yokujonga.
Khetha iScreen esigcweleyo.
Amaxwebhu aya kwimowudi yeScreen esigcweleyo.
Phuma kwimowudi esigcweleyo ngokucinezela u-Esc.
Ukuba ufuna ukuphelisa zonke iziphazamiso, beka isikhangeli sakho kwimowudi yeScreen esigcweleyo ngokucinezela isitshixo esimfutshane seScreen esikwiqhosha lasekunene le-Esc. (Jonga lo mzobo.)
iinzuzo yellow iti ingcambu
ukucoca igazi kunye notywala
iziphumo ebezingalindelekanga zzzquil
iinxalenye zekhompyuter yedesktop
yintoni iatal hernia